जनयुद्ध दिवसको अवसरमा ने.क.पा. डोटीद्वारा स्कुललाई खेल सामाग्री बितरण::Dang news portal
जनयुद्ध दिवसको अवसरमा ने.क.पा. डोटीद्वारा स्कुललाई खेल सामाग्री बितरण
२५ अौ जनयुद्ध दिवसको अवसरमा ने. क. पा. डोटीले एउटा स्कुललाई खेल सामाग्री बितरण गरि मनाएको छ । जिल्ला इन्चार्ज तर्कराजको अध्यक्षातामा भएको उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि सेती महाकाली ब्युरो कार्यलय सचिव बिपिन रहनु भएको थियो । जिल्ला सचिव कालू पाण्डेले सन्चालन गरेको कार्यक्रममा स्थानिय जनता र अभिभावकको ब्यापक उपस्थिति रहेको थियो ।
जनयुद्ध दिबशको अबसर पारेर गरिएको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै ब्युरो कार्यलय सचिव बिपिनले देश र जनताको मुक्ति नहुन्जेलसम्म क्रान्ति जारी रहने बताउनुभयो । ‘जनता निरासामा छन् । जनताले मुक्ति नभएको र जनयुद्धका सबै मुद्धामाथी प्रचण्डले बाबुरालेले धोका दिएकाले फेरी पनि क्रान्ति गर्नुपर्ने अाजको अावश्यकता हो’- उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा स्कुलका प्रिन्सिपलले नेपालमा भएको जनयुद्धले जनतालाई धेरै परिबर्तन र चेतनाको बिकास भएको र अहिले धोका भएको बताउनु भयो । टीका लगाई हर्ष उल्लासका साथ सुरु गरिएको कार्यक्रममा ब्युरो कार्यलय सचिबले खेल सामाग्री हस्तान्त्रण गर्नु भएको थियो।
२५ जनयुद्ध दिबशको सुभकामना दिदै महान वीर शहिदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली सम्मान र स्मरण गर्नु भयो । कार्यक्रमको समापनमा बोल्दै जिल्ला ईन्चार्ज तर्कराजले अहिलेको यो राज्य ब्यबस्थाले देशलाई युद्धतिर धकेल्न खोजेको अारोप लगाउनु भयो । देश दिनदिनै भ्रष्ट्रचार, कालोबजारी, महङ्गी, कर छली, सिमा अतिक्रमण लगायत राष्ट्रघात गरिरहेका सत्ता र सरकारका दलालहरुले देशलाई बरबाद बनाईरहेको भन्दै यी सबै मुद्धाहरुका बिरुद्धा लड्न अाम जनतालाई सचेत गराउनु भयो । एमसिसि पास गराउने नाममा देशमा अमेरिकी सेनाको प्रेड स्थल बनाउन खोजिएको छ । यसका बिरुद्ध अाम नेपाली जनता एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो र कार्यक्रमको समापन गर्नुभयो ।